Ukusweleka kwe-COVID-10 yaseRussia ngoSeptemba kuphinda kabini inani elisemthethweni likarhulumente
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Ukusweleka kwe-COVID-10 yaseRussia ngoSeptemba kuphinda kabini inani elisemthethweni likarhulumente
Ukusweleka kwe-COVID-10 yaseRussia ngoSeptemba kuphinda kabini inani elisemthethweni likarhulumente.
Urhulumente waseRussia utyholwa ngokujongela phantsi iziphumo zobhubhani we-COVID-19 elizweni.
Ukufa kwe-COVID-19 yaseRussia ngokugqibeleleyo kuphantse kube ngama-450,000 - elona liphezulu eYurophu ngoku.
Ngaphandle kwezibongozo zikaPutin kunye nokufumaneka ngokubanzi kwesitofu sokugonya sasekhaya, yi-32% kuphela yabantu baseRussia abagonywe ngokupheleleyo.
IMoscow yavala iinkonzo ezingabalulekanga kangangeentsuku ezili-11 ngoLwesine njengoko ilizwe lisilwa nentsholongwane eyophula irekhodi.
Abantu abangama-44,265 babulawa yi-COVID-19 eRussia ngoSeptemba, ngokutsho Rosstat.
Eli nani lisasilela kwirekhodi laseRussia lokufa kwabantu abangaphezu kwama-50,000 be-coronavirus ngoJulayi, kodwa laliphantse laphinda kabini uqikelelo olusemthethweni lukarhulumente waseRussia.
Urhulumente osemthethweni uthe iRussia yabona ukubhubha kwabantu abangama-24,031 ngoSeptemba.
Amanani amatsha azisa inani lokufa kwe-coronavirus eRussia ukuya phantse kuma-450,000, elona nani liphezulu eYurophu.
Urhulumente waseRussia utyholwa ngokujongela phantsi iziphumo zobhubhani we-COVID-19 elizweni kwaye umzobo kaRosstat - okhutshwe ngolwesiHlanu-upeyinte umfanekiso omnyama kakhulu kunokuba amanani asemthethweni acebisa.
Amanani aseburhulumenteni aseRussia athathela ingqalelo kuphela abantu ababhubhileyo apho intsholongwane yasekwayo njengeyona nobangela wokufa emva kovavanyo lwesidumbu.
I-Rosstat, nangona kunjalo, ipapasha amanani phantsi kwenkcazo ebanzi yokusweleka okunxulunyaniswa nentsholongwane.
I-Russia lelona lizwe linzima kakhulu eYurophu ngubhubhane, kunye nabasemagunyeni bezabalaza ukulwa neemvakalelo ezichasene nogonyo.
Ngaphandle kwezibongozo ezivela kuMongameli waseRussia u-Putin kunye nokufumaneka ngokubanzi kweejabs zasekhaya, yi-32% kuphela yabantu baseRussia abagonywe ngokupheleleyo.
eMoscow Vala iinkonzo ezingabalulekanga kangangeentsuku ezili-11 ngoLwesine njengoko ilizwe lisilwa nentsholongwane eyophula irekhodi, eqhutywa ngamazinga asezantsi okugonya.
I-Russia irekhode abantu abayi-1,163 ababhubhileyo kwi-COVID-19 izolo.
UPutin uyalele ilizwe lonke 'iveki ehlawulweyo' (ukunqanda ukusetyenziswa kwegama elithi 'lotshixo' elingathandwayo) ukuqala ngoMgqibelo ngeenzame zokuphelisa ukusasazeka kwale ntsholongwane.